Musharax madaxweyne Maxamed Salad Qoryoley oo ka hadlay dilalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Gaalkacyo – Puntlandtimes
Musharax madaxweyne Maxamed Salad Qoryoley oo ka hadlay dilalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Gaalkacyo
BOSASO(P-TIMES)- Dr.Maxamad Salaad Qoryooley oo kamid ah musharixiinta xilka madaxweynenimo ee Puntland ayaa ka hadlay dil 8-dii bishan October magaalada Gaalkacyo loogu geystay wiil dhalinyaro ah, kaas oo lagu magacaabayey Xaamud Wardheere.
Musharaxa ayaa qoraal uu soo saaray marka hore shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland iyo ehelada wiilka dhalinyarada ee la dilay uga tacsiyeeyay geerida iyo dilka xaqdarada ah ee loo geystay marxuum Xaamud Wardheere.
Waxa uu nasiib daro ku tilmaamay in la beegsado dhalinyarada haldoorka u ah Bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Puntland.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sidoo kale wax laga xumaado ku tilmaamay in Puntland oo jirta 20 sano ay dadkeeda u geeriyoodaan qalab caafimaad la’aan awgii, waxaana uu ballan qaaday in arrintaasi uu wax ka qaban doono, isla markaana sheegay in aysan markale soo noqon doonin.
“Waa nasiib darro in la beegsado dhalinyarada hal doorka ah, kuwaasi oo ah xoogga dadka iyo dalka, waa in xukuumadda ay wax ka qabataa dhibaatada lagu hayo dhalinyarada” ayuu yiri Musharax Dr.Qoryooley.
“Tan iyo markii la asaasay Puntland waxaa shacabka adeegyo caafimaad u aadaan magaalooyinka Hargeysa iyo Muqdisho, taasina ma ahan mid la aqbali karo, waa in dalka laga hir geliyaa xarumo caafimaad oo dadka ay ka heli karaan adeegyo caafimaad oo dhammeystiran” ayuu Dr.Qoryooley oo hadalkiisa sii wata.
Ugu danbayn Dr. Qoryooley ayaa marxuumka Allah uga baryey inuu u naxariisto, denbigiisana dhaafo, su’aasha qabrigana Allah sulansiiyo, samir iyo iimaanna uu kasiiyo eheladiisa iyo guud ahaan shacabka Puntland.
Ma aha dilkii ugu horeeyay ee magaalada Gaalkacyo loogu geysto dhalinyaarada haldoorka ah,waxaana dilka marxuum Xaamud Wardheere ka horeeyay dilal kale oo loo geystay dhalinyarada Gaalkacyo oo uu ugu danbeeyay weriye Cabdirisaaq Saacid kaasoo hawlgali jiray Idaacad ku taal Gaalkacayo.
Bismilaahi raxmaani rixin
ilahay baa mahad isleh
Waxan ugatacsiyadaynayaa dhamaan dadka lagu laayey puntland ehelka iyo qoysaska ayka Baxeen
Laakin odagaya musharax qoryolay ma hada markii hunguri kagalay kursiga puntland
Miyuu ogaaday in bulshada reer gaalkacyo qabto amaan daro caafimaad daro.iyo dib u cdhac
Mr qoryolay haku dufan tiryoon rer orod halke aad kumaqnayd aad